Nofeembar – Blast Off to Kindergarten
Xirafadaha Layliska Bishaan
Ku dhirrigali is caawinta, wax wada qabsashada, wax wadaagidda, iyo in dadka kale loo naxariisto. Ilmahaaga ka caawi oo tababar ku sii sidii ay qalabka ay ku cayaaraan, buugagga, iyo waxyaabaha kale ula wadaagi lahaayeen kuwa kale. Ilmahaaga ka dhaadhici micnaha ka dambeeya caawinta iyo iskaashiga lala yeelanayo dadka kale.
Qoyska u dhis qawaaniin dhinaca adaabta oo hubso in uu qofkasta uu raaco. Ilmahaaga kala hadal waxa ku saabsan qawaaniinta iyo sababta ay muhiim u tahay in iyaga la raaco.
Ilmahaaga bar sida loola cayaaro iyo sida loola shaqeeyo dadka kale. Cayaarta cayaar waliba waa in dheelaan 2 qofood ama wax ka badan. each your child how to work or play with others. Play games that need 2 or more people.
Cayaar cayaarta ay caruurta raacayan nidaam xeer leh, sida cayaaraha shaxda oo kale, yooyool. “Hoggamiyaha ha la raaco,” ama wax meel yaala ee laga leexanay.
Dugsiga Ha Laysku Diyaariyo
Maalinkasta ilmahaaga u akhri ama la fiirfiiri buugagga. U sheeg waxa ay sawirradda iyo sheekada ku saabsantahay. Ilmahaaga tus in aad xarfaha u akhrinaysid marka laga bilaabo bidix midigna loo socdo iyo marka bogga uu dhammado in sheekada ay ka soconayo bidix ilaa midig. Ilmahaaga u dhaaf in uu baalasha badalo. Buugga madaxa u rog (gambisid) oo xida u hay. Eeg haddii ilmhahaaga uu u soo rogayo sida laga rabay.
Buuga, maqaallo iyo waxyaalo kaloo la daabacay ilmahaaga gacanta ka saar. Isha ku hay waxa uu ilmahaaga jecelyihay oo u dhaaf in uu doorto buugaaga uu rabo, sida bugaaga tareennada iyo bisadaha.
Iska eeg in ilmahaaga uu haysto tallaalada laga rabo iyo baarista caafimaadka ee wakhtiga la joogo. Dhakhtarka ilmahaaga xiriiri oo iska hubso in ay ayada tallaaladeeda ay wakhtiga haadirka marayaan meesha laga rabay. Hayso koobiga xogta taallada ilmahaaga. Ballan caafiimaadka looga baro ilmahaaga u qabo inta aysan galin dusiga barbaarinta.
Ilmahaaga bar sida cuntada loo cuno iyo in ay iskood gacmaha iyo wajiga iska dhaqaan. Ilmahaaa tababar ku sii in ay diifka iska siifiyaan ayna afka daboolaan marka ay hindhisayaan. Ilmahaaga u sheeg waxa ay yihiin jeermiska iyo sida ay ayga kuu soo jidaan karaan jirro.